बलिउडकै सर्वाधिक धनि नायिकाको सुचिमा पर्छिन अभिनेत्री प्रियंका,पति निकले दिए धोका? – News Nepali Dainik
बलिउडकै सर्वाधिक धनि नायिकाको सुचिमा पर्छिन अभिनेत्री प्रियंका,पति निकले दिए धोका?
प्रकाशित मिति: बुधबार, फाल्गुण १९, २०७७ समय: १५:४६:३८
बलिउड फिल्म क्षेत्रलाई सबैभन्दा धनी इंडस्ट्रीमध्ये एक मानिन्छ । किनभने अभिनेता र अभिनेत्रीले एक फिल्ममा काम गरेको बापत करोडौँ रुपैया लिन्छन् । यहि कमाइका कारण उनी हरु बिलासी जिबन शैली जिइरहेका हुन्छन् ।
गत वर्ष उनले अमेरिकी गायक निक जोनससँग विवाह गरेकी थिइन् । बिबाह पछि यो जमेडी घुमघाममै व्यस्त रहेको छ । बेला बेला घुन् गएका तस्विर सामाजिक संजालमा छाइरहन्छन् ।बलिउडमा मात्र नभई हलिउडमा पनि आफ्नो अभिनयको जादु देखिसकेकी प्रियंका अहिले आफ्नो प्रेम सम्बन्धको कारण चर्चामा रहेकी छिन्। उनको कुल सम्पती लगभग २८ मिलियन डलर रहेको छ।
Last Updated on: March 3rd, 2021 at 3:46 pm
२०९२ पटक हेरिएको